Mgbasa ozi ndi obodo: Uzo ohuru nke ikwalite ngwa ahia gi | Martech Zone
Y’oburu n’inwe ahia ahia gi rue ogologo oge n’enweghi ihe nchoputa di nma, yabụ na oge eruola nwa afọ mgbasa ozi dị ka ihe na-adịgide adịgide nye nsogbu gị. Mgbasa ozi ndị amaala ga - enyere gị aka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na - eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị ugbu a yana ịkwọ ndị ọrụ ezubere iche maka ọdịnaya gị. Ma nke mbụ, ka anyị banye n'ime ihe gini nke nwa afọ mgbasa ozi tupu anyị echee otú.
Nkọwa kachasị eji nke mgbasa ozi ala bụ nke ndị Ụlọọrụ Marketing Content, nke na-akọwa mgbasa ozi nke obodo dị ka:
Formdị ọ bụla nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ na-anapụta ozi nke ezubere iche, na-atọ ụtọ, ma baara ndị na-ege gị ntị uru nke na ọ nwere ọdịiche dị na ọdịnaya na-abụghị nke mgbasa ozi ma ọ bụ nke obodo.
Ọ bụ mgbasa ozi n'ụzọ ndị na - ege gị ntị anaghị akọwa ọdịnaya dị ka mgbasa ozi ozugbo mana ha na-ahụ ya dị ka ọdịnaya mgbe niile. Na mgbakwunye, ọdịnaya ahụ adịlarịrị uru ma na-atọ ụtọ maka ndị na-ege gị ntị yabụ na ọ gaghị adị ka nke na-emekpapụ ma ọ bụ na-ewepụ ihe.
Native mgbasa ozi na-abịa na ọtụtụ dị iche iche na nha. I nwere ike ime ya na Google n'ụdị nsonaazụ ọchụchọ akwụ ụgwọ. I nwekwara ike ime ya na mgbasa ozi mgbasa ozi n'ụdị nkwado ma ọ bụ nke a na-akwalite na Facebook, mmelite nkwado na LinkedIn, na ndepụta ndị a kwalitere na Twitter. I nwekwara ike biputere isiokwu na ikike dị elu dịka New York Times, The Huffington Post, BuzzFeed, na Forbes. I nwekwara ike iji nkwanye ọdịnaya ọdịnaya iji mee mgbasa ozi ala gị. Ndị a bụ ndepụta nke ederede akwadoro na ịntanetị niile na-egosi na ala nke isiokwu ị gụrụ na weebụsaịtị ụfọdụ.
Yabụ kedu otu ị ga - esi gbakwunye mgbasa ozi nke ala gị na mkpọsa ahịa gị?
Nwee Ihe Mgbaru Ọsọ doro anya
Mgbasa ozi nke ala nwere ọtụtụ elele n'agbanyeghị ụdị ha na-ewere. Ha nwere ike inyere gị aka iwulite mmata na ntụkwasị obi maka akara gị yana inyere gị aka ị nweta ndị ọzọ debanyere aha gị maka ọdịnaya gị. Otu uru dị mkpa bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ị na-ewepụ ọdịnaya ọhụrụ. Nwere ike ịdọrọ ndị mmadụ ọhụrụ site na iji ederede nke ị bipụtara na mbụ. Enwere uru ndị ọzọ ị na-enweta site na mgbasa ozi ala, dị ka ngosipụta mmekọrịta mmadụ na SEO dị mma maka akara gị. Mgbasa ozi ndị amaala na-anakọta ihe ngosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ụdị mmasị na nkọwa, n'adịghị ka mgbasa ozi ọkọlọtọ ndị ọzọ. Mgbe ị na-akwalite ihe ị na-eme na ntanetị mgbasa ozi, ị ga-eweta ozi gị na ndị na-ege ntị buru ibu, nke pụtara na ị ga-enwetakwu okporo ụzọ maka blọọgụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị gị. Mgbasa ozi ndị amaala bara uru ọkachasị mgbe ị na-amalite ma ị nweteghị SEO gị n’usoro.
Site n'ụdị nkwupụta mmekọrịta ọha na eze ị nwetara site na mgbasa ozi ala, ozi gị yiri ka ọ ga-ekwenyekwu ma ya mere o yikarịrị ka ị ga-ebute ọrịa. Mgbe ọtụtụ ndị mmadụ mara akara gị, ọ nwere ike ịtụgharị gaa ikike dị elu maka akara gị n'ụdị akara mmekọrịta na njikọta, nke nwere ike inye aka mee ka saịtị gị dị elu.
Site na mgbasa ozi ala, ị nwekwara ike ime ka ndị na-ege gị ntị na mgbasa ozi mmekọrịta gị too. Ihe nkwado gị na Facebook na Twitter nwere ike iweta ndị na-eso ụzọ na mmasị ọhụrụ, agbanyeghị naanị ma ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ metụtara ndị na-ekiri ya.
Ogo tupu oke
Iji nweta ọtụtụ mgbasa ozi na-adịghị mma, ị ga-emepụta ọdịnaya nke na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ya uru, na-atọ ụtọ, ma na-adọta mmasị. Erin Schneider, onye editọ na ọrụ ederede ederede dị ọnụ ala n'ịntanetị, kwuru,
Ihe ọ bụla ị na-eme, emela ọdịnaya nke yiri ka ị na-agbanye ngwaahịa gị. Ndị mmadụ anaghị achọ ka erere ha n’ihu ọha.
Iji malite, jide n'aka na ị na-ebipụta ọdịnaya ahụ na mgbasa ozi ala na weebụsaịtị gị. Ikwesiri ijide n'aka na ọdịnaya nke ọdịnaya dị elu, na ọ gụnyere oku ime ihe, yana echebere ya nke ọma ndị na-ege ntị ziri ezi nke na-agaghị ahụta ya nke ukwuu.
Jiri Ebumnuche Gị Mee Ihe nke Ọma
Na-aga mgbe niile maka ndị ọrụ bụ ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị yiri ndị ahịa gị. Ikwesiri iji retargeting maka uru gị, na-aga maka ndị mmadụ na-agadịrịị na webụsaịtị gị tupu ịlele ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ọ bụla.
Native Mgbasa ozi esighi na Social Media, Oke
Dịka anyị kwuburu na mbido, mgbasa ozi nke mba na-agụnye ọ bụghị naanị nkwalite mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta. I nwekwara ike ide ederede nkwado na saịtị mgbasa ozi dị ka Forbes na Buzz Feed. Ihe ndị a ga-adọta uche gaa na akara gị ma nwee ike ịgbanwe echiche ndị na-adịghị mma gbasara akara gị.
Dabere n'otú usoro mmefu ego gị si sie ike, ị ga-ahụkwa ọrụ nkwanye ọdịnaya bara uru. Ha nwere ike ibuwanye ọnụ ọgụgụ nke echiche ị na-enweta na ọdịnaya gị site na itinye ya na saịtị nke onye nkwusa buru ibu.
Agbanyeghị na ị lere ya, mgbasa ozi amaala bara ezigbo uru, yana ọtụtụ ndị ahịa ugbu a na-eji ya arụ ọrụ. Ọ bụ ụzọ dị mma iji jide ndị na-ege ntị ọhụụ wee wepụta aha gị n’ebe ahụ.
Tags: nwa afọ mgbasa ozinkwalite ngwaahịakedu ihe bu Mgbasaozi